Mmekọrịta 'Ngwakọ usoro oku = Ihe ịtụnanya | Martech Zone
Tuzdee, Machị 24, 2009 Sunday, Eprel 24, 2016 Douglas Karr
Na Mọnde, enwere m ohere ịgagharị mmekọrịta, gee ntị ma debe usoro ha n'ọrụ, ma jiri ngosipụta zuru oke nke Hey Otto - usoro ọgbakọ mkparịta ụka olu na ntanetị nke na-eji teknụzụ Mmekọrịta na njedebe azụ.
Ndị ụlọ ọrụ nwere nnukwu ụlọ ọrụ ịkpọ oku na-agbada n'okporo ụzọ abụọ dị iche iche, ma ọ bụ sistemụ na-akpaghị aka (ASR) ma ọ bụ jiri nnukwu ọnụ ụlọ dị oke ọnụ nke ndị na-elekọta oku. Callkpọ oku a na-akpọ IVR na-akụda mmụọ, oge ichere onye na-elekọta ya na-abụkarị ihe ọchị. Anụmanụ m na-arụ bụ mgbe m kpọrọ oku na sistemụ, ọ chọrọ ka m pịa nọmba akaụntụ m, mgbe ahụ onye nnọchi anya ndị na-akwado ndị ahịa (CSR) gwara m ka m megharịa ya mgbe m mechara nweta ha na ekwentị.
Mmekọrịta bụ sistemụ ngwakọ nke na-arụ ọrụ dị ịtụnanya. Ọ bụrụ na ASR enweghị ike ịghọta azịza ya, a ga-eburu ya gaa na Ndị nyocha. Ndị a bụ ndị ọkachamara na-ejikwa ọtụtụ akụkọ na-ejide njide nke usoro ahụ enweghị ike ịmata. Nsonaazụ njedebe bụ ahụmịhe ọhụụ ngwa ngwa maka ndị ahịa! Kama ịme ka ị kwugharịa ugboro 3 ma mesịa ịkwụsị gị ijide gị ent Ndị Ebumnuche Ebumnuche na-ege ntị n'ozi gị ma dezie ya n'ụzọ kwekọrọ na ya.
Enweghị m ike ị banye na nkọwa, mana usoro ntụgharị na njikwa maka ndị nyocha intanet ga-eme ka uche gị daa. Ọ dị mma, nwere nyocha nyocha, yana ụgwọ ọrụ oge ọsọ ọsọ. Centerslọ ọrụ oku nwere ike ịrụ ọrụ na ntakịrị akụkụ nke ihe onwunwe ma mezie oku ndị ọzọ… ma hụ na ọ ziri ezi na afọ ojuju ndị ahịa. Pịa ma ọ bụrụ na ị hụghị Hey Otto vidiyo.
Hey Otto bụ olu, weebụ na iPhone jikọtara ngwa na mmekọrịta mmekọrịta ya na ike ya. Lelee vidiyo ahụ maka ụfọdụ nhọrọ dị elu na Hey Otto, dị ka ịnwe Otto na-akpọ ndị bịara ya ma ọ bụ na-ebugharị oku nzụkọ gị site n'otu ekwentị gaa na ekwentị ọzọ - na-enweghị ndị bịara ya amataghị ya!
Tags: asrcsrhey ottoebumnuche ndị nyochammekọrịtaIVR
Echeghị m na ihe ịtụnanya na-eme ka usoro mmekọrịta. Mmekọrịta bụ kwantum itu ukwu na-aga na oku center technology na agwakọta mmadụ & technology Filiks. Companylọ ọrụ ọ bụla nwere nnukwu ụlọ ọrụ ịkpọ oku kwesịrị inyocha iji usoro a.
Enweela m ụfọdụ ihe ngosi na mmekọrịta mmekọrịta n'ihu (HotBox Pizza kpamkpam kpochapụrụ m na oge mbụ m ji ya), mana nzukọ dị ka ngwa dị egwu nke ahụmịhe onye ọrụ dị ịtụnanya. Enweghị UI dị ka olu mmadụ!
Enweela m ụfọdụ ihe ngosi na mmekọrịta mmekọrịta na mbụ, HotBox Pizza kpochapụrụ m kpamkpam oge mbụ m jiri ya, mana nzukọ dị ka ngwa dị egwu maka ahụmịhe onye ọrụ dị ịtụnanya. M ga-eji.
Akpọrọ m n'ime HotBox Pizza usoro yana - ọ bụ ịrịba!